Sanduuqa Dhibaatada Hantida Ganacsi
Deeqo lagu caawiyo milkiileyaasha yaryar ee gaarka loo leeyahay ee la soo gudboonaada dhibaato.
Ku saabsan Sanduuqa
20 Ogosto 2020, Dowladda Victoria waxay kordhisay Qorshaha Gargaarka Kireysiga Kireysiga (CTRS) illaa 31 Diseembar 2020. Tani waa in la caawiyo kireystayaasha ganacsiga ee dakhligoodu saameeyey cudurka faafa ee coronavirus (COVID-19).
Sanduuqa Dhibaatada Hantidhawrka Ganacsi waxaa loogu talagalay milkiileyaasha yaryar, kuwa gaarka loo leeyahay oo ay ku adagtahay dhaqaale ahaan inay yareeyaan kirada kiraystayaasha ee ku hoos jira CTRS.
Dawlada Fiktooriya waxay bixinaysaa deeqo gaaraya ilaa $ 3,000 kiro ahaan. Hantiileyaasha waa inay awoodaan inay muujiyaan inay ku adagtahay dhaqaale kadib markay yareeyaan kirada kiraystayaashooda ee ka raadsaday gargaarka CTRS.
Wixii macluumaad ah ee ku saabsan caawimaadda kale ee ay heli karaan milkiileyaasha guryaha, oo ay ku jiraan gargaarka canshuurta dhulka, fadlan booqo Xafiiska Dakhliga Gobolka ee Gargaarka Canshuuraha Berriga degel internet.
Waad dalban kartaa gargaar illaa 16 Oktoobar, ama ilaa lacagtu dhammaato haddii tani ay marka hore timaaddo.
Fadlan akhri macluumaadka ku yaal boggan, oo ay ku jiraan tilmaamaha iyo su'aalaha inta badan la is weydiiyo ka hor intaadan dalban. Haddii aad su'aalo qabto, waad nala soo xiriiri kartaa ama soo wici kartaa 13 22 15. Haddii aad caawimaad uga baahan tahay turjubaan, wac TIS National 13 14 50 weydiina khadka ganacsiga Victoria (13 22 15).
Tilmaamaha Deeqaha Dhibaatada Mulkiile Ganacsi (DOCX 1527.31 KB)
Codso hadda Fur codsi badbaadi
Waa maxay taageerada la heli karo?
Qiyaasta deeq kasta waxay la mid noqon doontaa qadarka tanaasulka kirada ee la siiyay kireystaha Kani waa ilaa $ 3,000 kireyste kasta oo u qalma. Ka-dhaafida kirada ayaa ah halka kirada ama qayb ka mid ah kirada lagu leeyahay muddo heshiis ah aan dib loo bixin.
Thao waa mulkiile guri siiyay kireyste ka dhaafida kirada oo ah $ 1600 tan iyo markii cudurku bilaabmay. Bixiyay [magaca gelinta] xaq ayuu u leeyahay tilmaamaha, [insert name] wuxuu dalban karaa $ 1600 taageero ah.
Ayaa dalban kara deeqdan?
Mulkiilayaasha guryaha ayaa codsan kara haddii ay buuxiyaan dhammaan shuruudaha hoos ku qoran.
Fadlan akhri tilmaamaha barnaamijka ee macluumaadka sharciga ee mid kasta oo ka mid ah shuruudahaan.
Waa inuu noqdaa shaqsi gaar ah (yacni qof) ama milkiileyaal wadajir ah (laba qof ama ka badan) oo shaqsiyaad gaar ah leh. Waa inaysan noqon mulkiilayaal iyada oo loo marayo Sanduuqa Superannuation-ka ee Is-Maamulaha, Aaminaadda ama hay'ad kale oo isku dhafan.
Waa inuu lahaadaa wadarta dhulka la canshuuri karo (oo ay ku jiri karaan qayb ka mid ah) wax ka yar $ 1 milyan sida lagu muujiyay Qiimeynta Canshuuraha Berriga ee Xafiiska Gobolka ee 2020. Meesha dhulku aanu buuxin marinka xaddiga cashuuraha berriga, Ogaysiiska Qiimayaasha Dawladda Hoose ee 2019-20 ayaa loo isticmaali karaa in lagu muujiyo lahaanshaha dhulka. Meelaha ugu muhiimsan ee ay degan yihiin (halka ay inta badan ku nool yihiin) kuma jiro qiimeyntaan.
Ma yahay milkiile guri (ama waa milkiileyaal guri) hal ama in kabadan guryaha uu kireyste xaq ugu leeyahay CTRS Victoria. Tan macnaheedu waa kiraystaha waa:
Shirkad yar oo dhexdhexaad ah (SME) oo leh wareejin ka yar $ 50 milyan oo leh Lambarka Ganacsiga Australia (ABN); iyo
Qayb ka mid ah qorshaha Dawlada Dhexe ee 'JobKeeper'.
Waxaa la siiyey kiraystaha kireynta iyadoo la raacayo xeerarka hadda jira (iyo sida ku cad heshiiska kirada ee hadda). Tani waa inay ahaataa ugu yaraan 30 boqolkiiba wadarta kirada la bixin karo. Ugu yaraan boqolkiiba 50 ee gargaarka kirada ayaa ah ka-dhaafitaan u dhigma ugu yaraan saddex bilood ka hor ama ka dib taariikhda Sanduuqaani bilaabmay
Waa inuu kujiraa dhibaato dhaqaale, ama kudhowaad dhibaato dhaqaale, sababo laxiriirta hoos udhaca kirada kiraystaha CTRS ee uqalma.
Fadlan tixraac tusaalooyinka xaq u yeelashada deeq-lacageedka qeybta FAQ qaybta si aad u aragto sida tilmaamahan loogu dhaqmayo.
Macluumaadka dalabka muhiimka ah
Codsaduhu wuxuu samayn karaa oo keliya hal codsi oo loogu talagalay sanduuqa. Mulkiile leh in ka badan hal hanti ganacsi oo u-qalma CTRS ayaa dalban kara guri kasta oo u qalma CTRS hal dalab. Tani waa haddii hantidooda guud ee la soo ururiyey (wadar ahaan) dhulalka la canshuuro ay leeyihiin qiime goob ka yar $ 1million. Meelaha ugu muhiimsan ee ay degan yihiin (halka ay inta badan ku nool yihiin) kuma jiro qiimeyntaan.
Halka ay ku yaalliin wax ka badan hal milkiile dhisme, deeqaha ayaa loo qaybiyaa shaqsiyaad codsadeyaal ah iyadoo loo eegayo danaha ay ka leeyihiin guriga. Tusaale ahaan haddii ay jiraan seddex qeyb-milkiile oo isla wadaaga saamiyada hantida laga kireeyay kirayste u-qalma CTRS, qayb-milkiile kasta wuxuu heli karaa seddex meelood hal meel lacagta u-qalma ee ugu badnaan $ 3,000 oo deeq ah. Qayb-milkiile kasta waa inuu si shaqsi ah u dalbadaa deeqda.
Lacagta deeqda ah waa inay u isticmaalaan shakhsiyaadka ama milkiilayaasha wadajirka ah inay ka caawiyaan kirada hoose ee la siiyo kiraystaha u-qalma CTRS iyadoo la raacayo xeerarka.
Maxay tahay caddeynta codsadayaashu u baahan yihiin inay bixiyaan?
Codsadeyaashu waa inay bixiyaan:
Nuqul ka mid ah ogeysiiskooda Qiimeynta Canshuurta Berriga ee 2020. Haddii dhulka aan lagu qiimeynin canshuurta berriga sannadka 2020, isticmaal Ogaysiiska Qiimaha Dawladda Hoose ee 2019-20. Dukumiintiyadan waxay muujinayaan wadarta dhulka iyo meesha ay ku yaalliin dhismaha ganacsiga u qalma CTRS.
Nuqul ka mid ah heshiiska hadda lala galay kiraystaha u-qalma CTRS. Tani waa in la muujiyo inta kirada la dhimay iyo inay tahay heshiis hada socda.
Faahfaahinta xiriirka kiraystaha. Tani waa in la caddeeyo in kiraystayaashu u qalmaan CTRS.
Waxyaabaha ay tahay in la ogaado ka hor inta aan la codsan
Markaad eegayso codsiyada, waxaan tixgelin doonnaa:
Natiijooyin kasta oo uu helo maamule ka dhan ah milkiile shaqsi ama milkiileyaal wadajir ah; iyo / ama
Mulkiile ama milkiileyaal wadajir ah oo lagu dhawaaqay inay musalaf yihiin.
Dhammaan su'aalaha ku jira arjiga waa in la dhammaystiro. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ka dhigto qiimeyntaada iyo lacag-bixinta deeq-lacageedka mid dhakhso badan.
Codsadayaasha waxaa hubin kara Dowlada Fiktooriya ama wakiiladeeda. Haddii la waydiiyo, kuwa deeqaha helayaa waxay u baahan doonaan inay muujiyaan dukumiintiyo sida qiimeynta canshuurta dakhliga si loo caddeeyo dhibaatada. Waxaa laga yaabaa in la waydiiyo kuwaas ilaa toddobo sano ka dib marka deeqda la oggolaado.
Deeqda ayaa dib loo bixin doonaa haddii la dalbado haddii
wixii macluumaad ah ee ku jira arjiga waxaa loo arkaa inuu yahay been ama marin habaabin, ama
deeqaha lama codsanayo sababaha lagu sheegay sanduuqa sida ku qeexan tilmaamahan iyo arjiga ku lifaaqan.
Codsadeyaashu waa inay ku dalbadaan khadka tooska ah iyaga oo adeegsanaya badhanka 'Codso hadda' ee boggan ku yaal.
Dhammaan su'aalaha ku jira arjiga waa in la dhammaystiro. Fadlan ku soo lifaaq dukumiintiyada aan weydiisanay si qiimeyntaada iyo lacagaha deeqaha ah ee aad xaqa u leedahay si dhaqso leh loogu sameeyo.
Waaxda Shaqooyinka, Gobollada iyo Gobolladu waxay isku dayi doonaan inay la xiriiraan dhammaan codsadayaasha toban maalmood oo shaqo gudahood si ay ugu sheegaan inay heleen deeqda iyo in kale.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad dheeraad ah fadlan nala soo xiriir ama wac 13 22 15.
Faahfaahin dheeri ah iyo taakuleynta ganacsiyada Soomaali
Wixii taageero iyo macluumaad ah ee ku jira Soomaali, tag a Business Victoria degelka.
Caawinta helitaanka Business Victoria adeegyada luqaddaada, la xiriir TIS National ama wac 13 14 50 oo weydii Business Victoria khadka tooska ah (13 22 15).
Macluumaadka ugu dambeeya ee ku saabsan coronavirus (COVID-19) oo ku qoran Soomaali, tag www.coronavirus.vic.gov.au/soomaali